ဇန်နဝါရီလ 2020 | RayHaber | raillynews
[21 / 01 / 2020] Yavuz Sultan Selim တံတားအတွက်ပေးတဲ့ Pass Guarantee ကတော့နောက်တစ်ခါမကျန်တော့ဘူး	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[21 / 01 / 2020] Ankara Sivas YHT လိုင်းရှိလှေငြိမ်ပြProbleနာ! 60 ကီလိုမီတာရထားဖယ်ရှားခဲ့သည်	06 တူရကီ
[21 / 01 / 2020] Gaziray အတွက်ရထားလမ်း ၈ ခုတင်ဒါတင်ဒါ	27 Gaziantep
လများ: ဇန်နဝါရီ 2020
2019 ၏ဒုတိယနှစ်ဝက်တွင်အော်ပရေတာ IC İçtaşİnşaat-Astaldi လုပ်ငန်းစုမှ ICA သို့ပေးဆောင်ရမည့်ငွေပမာဏကို ICA သို့အကြီးအကျယ်ဆုံးဖြတ်သည်၊ အကြောင်းမှာစီမံကိန်းသည် Yavuz Sultan Selim တံတားမှ ဖြတ်၍ မသွားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ လ၏အဆုံး [ပို ... ]
Ankara နှင့် Sivas ကိုဆက်သွယ်မည့် ၄၀၆ ကီလိုမီတာမြန်နှုန်းမြင့်ရထားလမ်းတွင်“ ballast” တွင်ဖြစ်ပွားသောပြtoနာကြောင့်ကီလိုမီတာ ၆၀ အပိုင်းတွင်ထားရှိသောသံလမ်းများကိုဖယ်ရှားခဲ့သည်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကာလအတွင်းပေါ်ပေါက်လိမ့်မည်ဟုဝန်ရုပ်သိမ်း, လိုင်းတလျှောက်တင်ကြ၏ [ပို ... ]
အစ္စလာမ့်ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်မှချေးငွေနှင့်အတူ Iller Bank Gaziantep Metropolitan Municipality Gaziray Suburban Project အတွက်မော်တော်ယာဉ်တင်ဒါ (၈) ခုပြုလုပ်လိမ့်မည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုအစုအတွက်4မော်တော်ယာဉ်များနှင့်အတူစုစုပေါင်း 8 [ပို ... ]
21 ဇန်နဝါရီ 1902 ဘဂ္ဂဒက်မီးရထားလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်းနှင့်လည်ပတ်ခြင်းအတွက်နောက်ဆုံးလိုက်လျောမည့်သဘောတူညီချက်ကိုအော်တိုမန်ပြည်နယ်နှင့်အာနတိုလီယန်မီးရထားကုမ္ပဏီတို့အကြားလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ စာချုပ်သက်တမ်းကို 99 နှစ်အဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ လမ်းကြောင်း, Konya-Karaman-Eregli-Adana-Hamidiye-Kilis-Abyss-Nusaybin-Mosul-Tekrik-Samarra-Baghdad-Karbala-Najaf မှ [ပို ... ]
၂၀၂၂ တွင်ဖွင့်လှစ်ရန်စီစဉ်ထားသော Ankara - İzmirအမြန်ရထားရထားနှင့်ပတ်သက်သည့်အစီရင်ခံစာကိုပြင်ဆင်ခဲ့သောတူရကီအင်ဂျင်နီယာများနှင့်ဗိသုကာများပြည်ထောင်စုကုန်သည်များအသင်း (TMMOB) နှင့်ဆက်စပ်သည့်ဘူမိဗေဒဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာကုန်သည်ကြီးများအသင်းသည်Eskişehir၏အစိတ်အပိုင်း၏အစိတ်အပိုင်းတွင်တည်ရှိသည်။ [ပို ... ]
လွတ်လပ်ရေးကြေငြာသည့် နေ့မှစ၍ ပြင်ပကမ္ဘာနှင့်အဆက်မပြတ်တိုးချဲ့။ တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့်ဥဇဘက်ကစ္စတန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်၏စီးပွားဖြစ်လှုပ်ရှားမှုများသည်မကြာသေးမီကအလွန်အရေးကြီးသောတိုးတက်မှုများနှင့်အတူဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသည်။ နှစ်နိုင်ငံ၏စီးပွားဖြစ် [ပို ... ]
ယင်းကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းအစည်းအဝေးများတွင်ဖော်ပြခြင်းဖြင့်ခေါ်ဆောင်သွားလမ်းကြောင်းကိုဝန်ကြီးချုပ် Recep Tayyip အာဒိုဂန် Bestepe အမျိုးသားကွန်ဂရက်နှင့်ယဉ်ကျေးမှုစင်တာတွင် '' 2019 ခုနှစ်တစ်နှစ်တာတူရကီရဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးရထားလမ်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်ကိုပေး၏။ ငါတို့ရထားလမ်းအားလုံးမှာ '2019 [ပို ... ]
စာသင်ချိန်အစတွင်AŞTİတွင်တက်ကြွသောနေ့ရက်များရှိသည်။ ကျောင်းသားသိပ်သည်းမှုတိုးလာသည့်AŞTİတွင် Metropolitan Municipality သည်လုံခြုံရေးအစီအမံများကိုတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ ကျောင်းသားများ၏စိတ်အားထက်သန်မှုကိုအန်ကာမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးနှင့်ဆက်စပ်သည့် BUGSA မှဖွင့်လှစ်သောAŞTİရှိကျောင်းများအားလပ်ရက်တိုးမြှင့်ခဲ့သည် [ပို ... ]
၎င်း၏စီးပွားရေးနှင့်ထိရောက်သောမောင်းနှင်မှုနည်းပညာပုံစံကြောင့် mirzmir Metro သည် ၁၀ နှစ်အတွင်းလျှပ်စစ်ဓာတ်အားလီတာ ၆ သန်းကိုစုဆောင်းနိုင်ခဲ့သည်။ ရထားလမ်းစနစ်၏အရေးအပါဆုံးအသုံးစရိတ်တစ်ခုဖြစ်သည့်စွမ်းအင်ကိုပိုမိုချွေတာသုံးစွဲခြင်းအတွက် Izmir သည် [ပို ... ]
Balikkesir မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းနှင့်မီးရထားစနစ်များသည်နိုင်ငံသားများအားပိုမိုလုံခြုံသောလမ်းများပေါ်တွင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုသေချာစေရန်ခရိုင် ၂၀ တွင်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေသည်။ Balıkesir Metropolitan မြူနီစီပယ်၏အခွင့်အာဏာနှင့် [ပို ... ]
နိုင်ငံသားများအားကျေနပ်မှုမရှိသောအဖြေမှာပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ကြီးဌာနမှလေဆိပ်နှင့်ရထားလမ်းစီမံကိန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ Çorumပြည်သူလူထုသည်တောင့်တ။ သိချင်စိတ်နှင့်စောင့်နေခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ကြီးဌာနÇorumတွင်လေဆိပ်တည်ထောင်ရန်အကြောင်းခရီးသည်မျှော်လင့်ချက်များနှင့်ယာဉ်ကြောများ [ပို ... ]